यी हुन् मानव इतिहासकै धनी व्यक्ति, सम्पत्ति कति थियो ? · Aawaj Nepal
यी हुन् मानव इतिहासकै धनी व्यक्ति, सम्पत्ति कति थियो ?
अहिले विश्वका सबैभन्दा धनी मानिस अमेजन कम्पनीका मालिक जेफ बेजोस हुन् । हालै फोर्ब्स म्यागेजिनले जारी गरेको सूची अनुसार उनको कूल सम्पत्ति १ खर्ब ३१ अर्ब रहेको छ । दुनियाका अन्य धनी मानिसहरुको नाम लिनुपर्दा बिल गेट्स, वारेन बफेट, कार्लोस स्लिम आदिको नाम आउँछ । हामीले वर्षौँदेखि यिनै नामहरु विश्वका सबैभन्दा धनी मानिसको रुपमा पढ्दै आएका छौँ । तर हामीलाई मानव इतिहासकै एकजना सबैभन्दा धनी मानिसको बारेमा सायद थाहा नै छैन ।
हो, अहिलेका सर्वाधिक धनी मानिस जेफ बेजोज भन्दा ३ गुणा धेरै सम्पत्ति भएका एक मानिस पनि यो धर्तीमा थिए । इतिहासकारहरुले ती व्यक्तिलाई मानव इतिहासमै सबैभन्दा धनी व्यक्ति मान्छन् । सन् १२८० देखि १३३७ सम्म माली देशको राजा रहेका मनसा मुसा प्रथम मानव इतिहासकै सबैभन्दा धनी मानिस हुन् । ती बादशाह सुन, चाँदी तथा हीराजस्ता धेरै बहुमूल्य खनिज पदार्थ तथा खानीहरुको मालिक थिए । उनको सम्पत्ति कति थियो, उनी आफैंलाई थाहा थिएन भनिन्छ । उनको त्यतिबेलाको राज्यको केन्द्र माली भएपछि त्यो राज्य हालका अफ्रिकाका धेरै देशहरुसम्म फैलिएको थियो ।